ZMO ulwelwesi ngokuhlukana-mpilo imishini - China Hangzhou midi Air Ngokwahlukana Izinsiza kusebenza
Ukusebenza isimiso. Onomfutho emoyeni ngokusebenzisa kudivayisi emoyeni uhlanzekile ukususa ukungcola okuqinile ezifana namafutha, uthuli namanzi gaseous kakhulu, ku-ulwelwesi uhlelo ngokwahlukana, ngokuhlukana ulwelwesi uhlobo polyester eziyize fibre micro ugongolo integratedcomponent. Ungaphansi kwengcindezi zonke izinhlobo igesi adsorption, e eziyize fibre membranediffusion, Ukungena ngesilinganiso ezahlukene, ngokulandelana, esilibiza permeation igesi ratefor "igesi okusheshayo", njengomoya-mpilo, umhwamuko permeation isilinganiso; s ...
Onomfutho emoyeni ngokusebenzisa kudivayisi emoyeni uhlanzekile ukususa ukungcola okuqinile ezifana namafutha, uthuli namanzi gaseous kakhulu, ku-ulwelwesi uhlelo ngokwahlukana, ngokuhlukana ulwelwesi uhlobo polyester eziyize fibre micro ugongolo integratedcomponent. Ungaphansi kwengcindezi zonke izinhlobo igesi adsorption, e eziyize fibre membranediffusion, Ukungena ngesilinganiso ezahlukene, ngokulandelana, esilibiza permeation igesi ratefor "igesi okusheshayo", njengomoya-mpilo, umhwamuko permeation isilinganiso; ezincane "bese wehlisa" igesi, ezifana nitrogen. igesi ezixutshiwe ngokusebenzisa ulwelwesi, "igesi okusheshayo" is ahlanganiswe e thelow-ingcindezi ngaphandle, "bese wehlisa" Igesi baceba umfutho ophakeme ngaphakathi, ngakho njengoba torealize ukwehlukana umoya-mpilo kanye nitrogen. Ngaphansi kokulawula PLC ningakuqaphela okuqhubekayo esitebeleni okukhipha umkhiqizo womoya-mpilo.
1, inqubo ilula, isakhiwo compact, kwezomnotho kakhulu futhi ukuhlangabezana nezidingo abasebenzisi ezahlukene nitrogen;
2, uphiko ulwelwesi yokumelana umfutho ophakeme, ongaphakeme ingcindezi ukulahleka, onganelisa ingcindezi nitrogen ne abasebenzisi okusezingeni eliphezulu;
3, inkinobho valve nezinye izingxenye ezinyakazayo, ukusebenza static, ongaphakeme ukwehluleka, ukugcinwa lomsebenzi yesondlo elincane;
4, idivayisi has izinzuzo indawo encane umsebenzi, futhi ingasetshenziswa ukusebenza endlini futhi mobile;
5, indinganiso ulwelwesi module ihlanganiswe design, ngokwandisa ingxenye ulwelwesi ngokwahlukana eseqedile kalula nitrogen ukukhiqizwa umthamo ukunwetshwa;
6, izinga eliphakeme ezishintshayo, yokupaka elula; ukufinyelela gasconcentration umkhiqizo ngaphakathi imizuzu 10;
7, inqubo ukusebenza imishini futhi kungekho msindo, kungekho ukungcola, igesi umkhiqizo uhlanzekile, ongaphakeme amazolo iphuzu.
Ngo 8, amandla omlilo asekelayo izicelo, ke ithatha inzuzo enkulu enqubeni emoyeni ngokuhlukana, ephansi yokusebenza amandla.
Futhi okukhipha umoya-mpilo: 1 ~ 30000Nm3 / h, i-oksijini lokuhlushwa 30%, utshalomali membranemethod, ukugcinwa kanye nokusetshenziswa izindleko kuphela cryogenic futhi (V) by PSA70% kuya 80%, kanye ngezinga elikhudlwana, kwezomnotho ulwelwesi indlela.
Futhi umoya-mpilo ubumsulwa: 30% ~ 45% (ezimbili grade ngokuhlukana-mpilo ubumsulwa: 90%).
Umdwebo wokuhlelwa kwendikimba:
Previous: ZMN ulwelwesi ngokwahlukana nitrogen esikhiqiza kudivayisi
Okulandelayo: VPSA cleaner imishini-mpilo Generating
ZMN ulwelwesi ngokwahlukana nitrogen esikhiqiza kudivayisi